RSS: Ka dhig Xiriirka Cunnadaada Mid Cad | Martech Zone
RSS: Ka dhig Xiriirka Cunnadaada mid muuqda
Jimco, Janaayo 5, 2007 Khamiista, Oktoobar 23, 2014 Douglas Karr
Markii ay soo if baxeen daalacashada cusub, kama aanan walwalin sidii aan wax u gelin lahaa RSS isku xidho waxa ku jira boggeyga. Waxaan bilaabayaa inaan dib uga fikiro taas.
Haddii aadan horey uga warqabin, daalacadaan cusubi si otomaatig ah ayey u ogaan karaan RSS quudiso illaa inta laga aqoonsanayo gudaha bogga bogga. Gujinaya ah RSS calaamaduhu waxay keeneysaa inaad 'iska diiwaangeliso quudintaas' adoo adeegsanaya biraawsarkaaga. Marka markaad xulaneyso quudinta biraawsarkaaga, waxaad kula kulmi doontaa liiska sheekooyinka firfircoon ee laga heli karo quudinta.
Gudaha cinwaanka boggeyga, waxaan hayaa lambarka soo socda:
Browserku si otomaatig ah ayuu u arkaa koodhka wuxuuna siiyaa tilmaame in quudinta lagu qori karo:
Kahor intaan la sii deynin Internet Explorer 7, Microsoft waxay la kulantay kuwa kale ee soo saare barnaamijyada biraawsarka waxayna go aansadeen in astaan ​​caalami ah loo sameeyo RSS noqon lahaa
6-dii bilood ee la soo dhaafay, waxaan ku tiirsanaa gudaha RSS tixraac loogu talagalay dadka in ay ku biiraan quudintayda. Si kastaba ha noqotee, dhawaanahan waxaan sameeyay imtixaan aan dhigay RSS isku xidhka hoose ee boggeyga oo dhan. Qiyaas waxa Dhowr maalmood gudahood diiwaangelintayda quudinta ayaa ka booday qiyaastii 20%! (Waxaan isticmaalaa FeedPress si loo raad raaco).
Waxaan garwaaqsaday in tani aysan ahayn mid cilmiyeysan, laakiin waxaan kugula talin lahaa inay akhristayaashu iyagu leeyihiin RSS isku xirka quudinta ayaa si cad loo aqoonsaday oo ay heli karaan akhristayaashaada kuwaas oo adeegsada aalado kale oo aan si otomaatig ah u ogaan karin iskuxirka koodhkaaga madaxa.
Tags: codsigafeedfeed cinwaanka sumaddaiskuxirka quudintagubiyaharel beddelanrss feedrss cinwaanka cinwaankarss xmlXML
WordPress: # 1 Plugin goob kasta WAA IN AY leedahay
WordPress: Kaydinta iyo Soo Celinta Server kale
Jan 5, 2007 saacadu markay ahayd 7:19 PM
Sabab kale oo taas loo sameeyo: mararka qaarkood akhristayaashu waxay rabaan inay ku xirmaan rukunkaaga. Markii aan aqriyo qof aan rabo inaan ku biiro, inta badan waxaan ku dari doonaa xiriiriyeyaasheyda maalinta oo ay la socdaan warqad (Ku qoran) oo ku xiran quudintooda. Firefox 2 waxaan hayaa quudinno loo qaabeeyey inay toos u aadaan FeedDemon, marka haddii aadan haysan xiriirin bogga ah oo aan midig u gujin karo isla markaana nuqul ka bixin karo xiriiriyaha, markaa waa inaan fiiriyaa isha si aan u helo.
Jan 5, 2007 saacadu markay ahayd 8:08 PM
Taasi waa sida aan ugu qorey bartaada barta 'RSS icon' ee hoose. Marnaba dheg uma dhigin waxa tilmaamayaasha ku yaal cinwaanka cinwaanka biraawsarka laga yaabee laakiin halkii markaan isticmaalayo biraawsar taas oo aan badanaa ahayn, marwalba waxaan raadiyaa Icon.
wax kale oo la xasuusto sidoo kale maahan in qof kastaa ku soo galo bartaada internetka biraawsar. Qaarkood waxay ku imaan doonaan xiriiriyeyaasha macaamiishooda RSS-ka ee aan biraawsarka ahayn oo aad ayey u yartahay in daalacashayaasha macaamilka ee macmiilka ah ay sidan ku ogaadaan
Jan 5, 2007 saacadu markay ahayd 8:12 PM
Waxay ahayd xiriiriyaha sumadda RSS-ka ee aan ku qori jiray - maadaama aanan weligey fiiro gaar ah u yeelan cinwaanka cinwaankan oo lagu daray aad ayaan marar dhif ah ugu biiraa biraawsar.
Waxaan ku noolahay aqristaheyda RSS sidaas darteedna dhammaan xiriiriyadeyda asal ahaan waa la helay oo sidaas ayaa lagu kordhiyay sidaas oo aad u yar ayaa kaligood istaaga RSS macmiilka ayaa leh noocaas muuqaal ah
Doug, waxaan si buuxda kuugu weheliyaa kan! Kaliya waxaan ku qoray boosteejo cusub RSS Button of Love 🙂
Dhibic wanaagsan Sterling, anigana sidaas oo kale ayaan sameeyaa mararka qaarkood.
Jan 6, 2007 saacadu markay ahayd 7:59 PM
Talo wanaagsan, labadaba waan ku helay hadda.
Waad ku mahadsantahay qoraalkan. Waxaan mowduucan kala hadlayey baloogle kale bishii hore waxaanan had iyo jeer isweydiinayay meesha ugu wanaagsan ee lagu dhajiyo batoonka rukunka. Waqtigan xaadirka ah boggeyga waxaan ku hayaa kaliya astaanta RSS ee cinwaanka biraawsarka iyo lugtiisa, laakiin waxaan u maleynayaa mid ka mid ah dhinaca ama cinwaanka inuu waxtar yeelan doono sidoo kale, iyadoo lagu saleynayo faallooyinka aan halkaan ku aqriyay.
Jan 11, 2007 saacadu markay ahayd 10:48 PM
Anigu tayda ayaan ku haystay xagga sare, laakiin hadda waxaan la yaabanahay sababta aanan weligey u gelin hoosta hoose ka hor.